भारतसँग हारेपनि नेपाली खेलाडीलाई माया र समर्थन गर्न अल्मुताइरीको आग्रह - TajaKhabarTV
भारत बन्यो नम्बर एक टेस्ट टिम
ढाकामा साफ यु-१९ महिला फुटबल खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाई
टेस्ट क्रिकेटमा भारतको सबैभन्दा ठुलो जित
यू-१९ एसिया कपका लागि यी २० खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा, को को परे ?
२०७८, ३१ आश्विन आईतवार ०९:५१ October 17, 2021 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई अनुभवको कमी देखिएको बताएका छन् । गएराति भएको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भारतसँग ३–० ले पराजित भए पछि उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाली खेलाडीलाई माया र समर्थन गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ ।
नेपालीले दिएको माया आफूले कहिल्यै नभुल्ने भन्दै उनले सुरुको दिनदेखि नै नेपालीले आफूलाई समर्थन र सहयोग गरेको बताए । यस्तै, प्रशिक्षक अल्मुताइरीले पछिल्लो ६ महिना आफ्नो लागि कठिन भएको पनि बताएका छन् । उनले अब एक वा दुई हप्ताको आराम गर्ने त्यस पछि मात्रै नेपाल फर्कने नफर्कने विषयमा निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
१३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भारतलाई
भारतले १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि जितेको छ । माल्दिभ्समा शनिबार राति भएको फाइनल खेलमा नेपाललाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै भारत आठौं पटक च्याम्पियन बनेको हो । भारतको जितमा कप्तान सुनिल क्षेत्री, सुरेश सिंह वाङजाम र साहल अब्दुल समादले समान एक–एक गोल गरे ।
पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरीमा रोकिएको भारतले खेलको ४९ औं मिनेटमा सुनिलको गोलबाट अग्रता बनाएको थियो । यस संस्करणमा सुनिलको यो पाँचौं गोल हो । भारतको लागि यो उनको ८० औं गोल हो ।
खेलको ५० औं मिनेटमा सुरेशले गोल गर्दै भारतलाई २–० को अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा साहलले गोल गर्दै भारतलाई ३–० को जित दिलाए । यससँगै भारतले कीर्तिमानी आठौं पटक साफको उपाधि जित्न सफल भएको छ ।
नेपालको भने पहिलो पटक साफको उपाधि जित्ने सपना चकनाचुर भएको छ । तर, नेपाल पहिलो पटक साफमा उपविजेता बनेको छ । पाँच राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा भारत लिगको शीर्ष स्थानमा रहदै फाइनल खेलेको हो ।
२०७८, २० मंसिर सोमबार २०:४४
२०७८, १९ मंसिर आईतवार ०९:१७
जाभीको चलेन जादु, आफ्नै घरेलु मैदानमा फेरि स्तब्ध बार्सिलोना
२०७८, १८ मंसिर शनिबार ११:१८
एन्फाको यो निर्णयले आक्रोशित बने रेफ्री, सात जनाले एकै पटक दिए राजिनामा
२०७८, २१ मंसिर मंगलवार ०९:०१
२०७८, २० मंसिर सोमबार १६:२६
२०७८, २० मंसिर सोमबार ०९:०८
राप्रपा अध्यक्ष पदमा हारेपछि रिसले चुर चुर भए कमल थापा, हिमानी शाह माथि पनि खनिए
२०७८, १९ मंसिर आईतवार १९:३५
२०७८, १८ कार्तिक बिहीबार ०९:४२
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल ! कार्तिक १८ गते बिहीबार
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल कार्तिक १८ गते बिहीबार इश्वी सन…